कसरी भए माग्नेबुढा डिप्रेसनको सिकार ? – JanaSanchar.com
कसरी भए माग्नेबुढा डिप्रेसनको सिकार ?
संबाददाता : मोनिका गुरुङ	प्रकाशित मिति: (२०७३ भाद्र १९, आईतवार) १८:५२
‘मेरी बास्सै’ हास्यटेलिशृंखलाका कलाकार केदार घिमिरे अर्थात् माग्नेबुढा डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । आन्द्रामा घाउ भएको र खाना नपच्ने रोगका कारण उनी थला परेका छन् । लामो समयदेखि घिमिरे कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् ।
उनी घरमै स्वास्थ्यलाभ गरेर बसेका छन् । घिमिरेले थापाथलीस्थित नर्भीक हस्पिटलमा स्वास्थ्य चेकजाँच गराएका थिए । संघर्षका दौरानमा खाई नखाई कलाकारिता गरेका घिमिरेले अहिले त्यसको सजाय भोगिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि घिमिरे ओछ्यान परे पनि उनीबारे कलाकारसम्बन्धी कुनै संघ÷संस्थाले बोल्यो, न त सरकारले चासो देखाएको छ । उनी यति लामो समयसम्म किन कलाकारितामा क्रियाशील छैनन्, हुन सकेनन् भनेर उनका सहपाठीहरूले समेत चासो देखाएको देखिएन ।
कलाकारको हकहित र अधिकारका लागि भन्दै थुप्रै संघसंस्था स्थापना भएका छन् । राष्ट्रिय कलाकार संघ, नेपाल टेलिभिजन कलाकर्मी संघ छन् । त्यति मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध रहेका कलाकार संघ–संस्था पनि छन् । तर, कुनै पनि संघ–संस्थाले घिमिरेको उपचारबारे बोलेका छैनन् ।
के भन्छन् घिमिरे ?
लामो समयदेखि कलाकार घिमिरे थला परेपछि केही दिनअघि उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न निर्माता निर्देशक केपी पाठकको नेतृत्वमा कृष्ण ढुंगाना, राजु केसी, विमला केसी उनको घरमा पुगेका थिए । सो टोलीले थप उपचारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर घिमिरेलाई सोधेको थियो ।
जवाफमा घिमिरेले हाल आफू घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको बताएको पाठकले जानकारी दिए । उनले आफ्नो उपचारका लागि कसैसँग सहयोग रकम नमागेको बताएका थिए । उनले आफूलाई नायिका रेखा थापाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म लिन नगएको जानकारी दिएका थिए ।
कलाकार टोलीले चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गतको ‘चलचित्र कल्याणकारी कोष’ ले विरामी कलाकारको उपचारमा दुई लाख रुपैयाँ दिनसक्ने व्यवस्था भएको र त्यसका लागि आफूहरूले पहल थाल्ने बताएका थिए ।
के खान्छन् ?
कलाकार घिमिरेको आन्द्रामा घाउ आएकाले उनले हेभी खाना खान हुँदैन ।
त्यसैले अहिले उनी दिनहुँ साग–भात मात्रै खान्छन् ।
ध्वनि प्रदूषण सहन सक्दैनन्
चिकित्सकका अनुसार लामो समयसम्म खाना अपच हुँदा मान्छे मानसिक रोगको सिकार हुने गर्छ ।
घिमिरेलाई पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । उनलाई धेरै भीडभाड मन पर्दैन । त्यही भएर घिमिरेले मोबाइल बोक्न छाडेका छन् । मोबाइल बोके धेरैको फोन आउने भएकाले उठाउनै छाडेको उनले बताउने गरेका छन् ।
धुर्मुसबाटै माग्नेबुढाको उपेक्षा
मेरी बास्सै हास्य टेलिफिल्मलाई स्थापित र लोकप्रिय गराउन केदार घिमिरेको धेरै ठूलो योगदान छ । सुरुसुरुमा सीताराम कट्टेल अर्थात् धुर्मुससँग जोडी बाँधेर दर्शकमा लोकप्रिय माग्नेबुढा केही समयको अन्तरालमा एक्लिन पुगे ।
धुर्मुस र माग्नेबुढाले मेरी बास्सैमा दुई तीन वर्षसम्म फरक फरक अभिनय गरे । धुर्मुसले विभिन्न क्यारेक्टर जन्माएर आफूलाई स्थापित गराउँदै लगे भने केदार घिमिरेले विल्सनविक्रम राई तक्मेबुढासँग जोडी बाँधे । एउटै टेलिफिल्ममा अभिनय गरे पनि धुर्मुस र माग्नेबुढाबीच पाँच सात वर्षदेखि हार्दिक सम्बन्ध छैन ।
पछिल्लो समय मेरी बास्सैको लोकप्रियता घटेपछि एक वर्षदेखि धुर्मुस भूकम्पपीडितका लागि घर निर्माणमा व्यस्त छन् । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका नाममा विदेशबाट करोडौं रुपैयाँ ल्याएर उनी अहिले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरिरहेका छन् ।
‘नमुना बस्ती बसाल्न पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी जुटाउन सक्ने सीतारामलाई आफूलाई कलाकारिता क्षेत्रमा स्थापित गराउने केदार घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न फुर्सद छैन,’ एक कलाकारले भने । आफूसँगै अभिनय गरेर स्थापित सीताराम कट्टेलको जताततै हाई हाई हुँदा केदार घिमिरे भने गुमनाम छन् ।
तक्मेबुढालाई चलचित्र खेल्दैमा ठिक्क
च्यानल नेपालबाट आउने एउटा कमेडी सिरियलमा छोटोमोटो रोल खेल्ने विल्सनविक्रमलाई तक्मेबुढा बनाएर स्थापित गराइदिने श्रेय केदार घिमिरेलाई नै जान्छ ।
मेरी बास्सैमा राईले बोल्ने ‘नाइन्टिन फाउन्टिनको जमानामा…’ भन्ने थेगो माग्नेबुढाले नै जन्माइदिएका हुन् । तक्मेबुढाको चरित्र स्थापित भएपछि विल्सनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । त्यही भूमिकाका कारण विल्सनले दर्जनौं देश घुमे ।
दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरे । आर्थिक रूपले सम्पन्न पनि भए । लाखौं फ्यान बनाए । तर विरामी माग्नेबुढाबारे विल्सन मौन छन् ।
(२०७३ भाद्र १९, आईतवार) १८:५२ मा प्रकाशित